YEYINTNGE(CANADA): Saturday, June 09
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/09/20120အကြံပြုခြင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်က စိုးရိမ်စရာအခြေအနေများကတော့ ဒီအတိုင်းပါပဲ(ထိပ်လန့်သူမကြည့်ရ)
The head master from Tha ree konebound village was killed by his bangali student. He had been doing asateacher for 20 years.
သရေကုန်ဘောင်ကျေးရွာရှိ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးမောင်ချမ်းသာ အနှစ် ၂၀ကျော် သူစာသင်ခဲ့သော ကျောင်းသားများမှ သတ်ဖြတ်ထားပုံ
photo by Muuzaw
မောင်တောဖြစ်စဉ် (ဇွန်လ ၈ ရက်)၊ ထပ်မံရရှိသောဓါတ်ပုံများ(2)
စစ်တွေ ပဋိပက္ခ အသွင်ဆောင်မှု သေနတ်ပစ်ဖောက် ဟန့်တား
လူမျိုးရေး အသွင်ဆောင်သော ပဋိပက္ခမှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွါးနေသော ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ စစ်တွေမြို့တွင် ယနေ့ညနေ ၅နာရီခန့်က ဘုမေ ရွှာမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ၃၀၀ခန့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်>သော ဓည၀တီ ရပ်ကွက်များဘက်သို့ ၀င်ရောက်လာ၍ ရပ်ကွက် ဒေသခံများ တားဆီးစဉ် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပဋိပက္ခ အသွင်ဆောင်လာသောကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကားငါးစီးဖြင့် ရောက်ရှိလာကာ သေနတ်ပစ်ဖောက် ဟန့်တားခဲ့ရကြောင်း ဒေသခံများထံ ဆက်သွယ် မေးမြန်း ချက်အရ သိရှိရသည်။
မောင်တောဖြစ်စဉ် (ဇွန်လ ၈ ရက်)၊ ထပ်မံရရှိသောဓါတ်ပုံများ
မောင်တောမြို့ပေါ်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းဖွင့်လှစ်ထားသော အောင်မြေဗောဓိကျောင်း မြင်ကွင်းများ
မောင်တောမြို့နယ်၊ သားရေကုန်းဘောင်ကျေးရွာတွင် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က တွေ့ရသည့် ဘင်္ဂါလီ များမောင်တောမြို့နယ်၊ သားရေကုန်းဘောင်ကျေးရွာ ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က မီးရှို့ခံရမှုကို တွေ့ရစဉ်
မောင်တောအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
နေ့လည် ၂ နာရီ ၂၂ မိနစ်၊
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၂ (YPI)
မောင်တောအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ယနေ့အစည်းအဝေးကျင်းပကာ သဘောထားကြေညာချက် တစ်စောင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင် ပြည်သူများ၏ အိုးအိမ်ပစည်းများ ဖျက်ဆီးခံရခြင်း၊ အသက်ပေါင်းများ စွာ သေကြေပျက်စီးခြင်း၊ ဒဏ်ရာရရှိခြင်းတို့အတွက် ၄င်းတို့အနေနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားရပါကြောင်း NLD နှင့် မဟာမိတ်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၏ သဘောထားကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
သက်ဆိုင်ရာအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို မျှတစွာဖြင့် ထိရောက်လျင်မြန်သည့် အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်နှင့် ပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်များကို တရားဥပဒေနှင့် အညီ ကာကွယ်ပေးရန်ကိုလည်း တိုက်တွန်းထားသည်။
အကြမ်းဖက်မှုများကို လှုံ့ဆောင်နေသူများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်နေ သူများကိုလည်း ချက်ချင်းရပ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံထားသည်ကိုလည်း အဆိုပါကြေညာချက်တွင် တွေ့ရသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ပြုနေသူများအနေဖြင့်လည်း တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ။
ရုပ်မြင်သံကြားမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ က ပြည်သူများသို့ ပြောကြားမည့် အစီအစဉ် မရှိ
the Voice Weekly>
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မှု များကို အုပ်ချုပ်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ အခြေအနေ များ မူလ အတိုင်း ပြန်လည် တည်ငြိမ်အေး ချမ်းနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ တည်ငြိမ်အေးချမ်း မှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု အခြေအနေကောင်းများကို ဆက် လက် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် ပြည်သူများအားလုံးက ပူးပေါင်း ပါဝင်ကြရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ ဆင်ခြင်တုံတရား လက်ကိုင်ထား၍ မလိုလားအပ်သော လက်စားချေမှုများ၊ အမုန်းတရားနှင့် အာဃာတများကို သတိပြု ရှောင်ကြဉ်ကြရန်လည်း လိုအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအနေအထားတွင် အားလုံးကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် လည်းကောင်း၊ တစ်နိုင်လုံးနှင့်သက်ဆိုင်သော အရေးပေါ် အခြေအနေမျိုး ၌သာ ပြည်သူလူထုအား တိုက်ရိုက်ပန်ကြားလေ့ရှိသည့် အတွက်ကြောင့် လည်းကောင်း ယခုအခါ သတင်းများ ပြန့်နှံ့နေသည် ရုပ်မြင်သံကြားမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ က ပြည်သူများသို့ ပြောကြားမည့် အစီအစဉ် မရှိ ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ( နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အကြီးတန်းအရာရှိ တစ်ဦး၏ facebook စာမျက်နှာတွင်ယနေ့ ဖော်ပြထားသည်။)
ဘင်္ဂါလီ UPDATE (1)
ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ နံနက် မောင်တောမြို့တွင်း လက်ရှိအခြေအနေမှာ ငြိမ်သက်နေပြီး မြို့တွင်းသို့ ပေးဝေနေသည့်ရေကို စည်ပင်သာယာက ရပ်တန့်လိုက်ကြောင်း
မောင်တောမြို့ခံတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ရပ်တန့်လိုက်ရခြင်းမှာ
ရေပေးဝေနေသည့် ကန်တော်ကြီးကန်ကို ဘင်္ဂါလီများက အဆိပ်ခပ်လိုက်သောကြောင့်
ဖြစ်ကြောင်း မောင်တောမြို့ခံများက ဆိုပါသည်။ အဆိုပါသတင်းနှင့် ပတ်သက်၍
အတည်ပြုနိုင်ရန် ဆက်သွယ်စုံစမ်းနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် မောင်တောမြို့ဝန်းကျင်ရှိ ခရေကုန်းဘောင်ရွာမှ ဓားဒဏ်ရာများဖြင့် အသတ်ခံရသော ကျောင်းဆရာမ နှစ်ဦး၏ အလောင်းများ မောင်တောဆေးရုံသို့ ယနေ့နံနက် ရောက်ရှိလာကြောင်း သိရသည်။ စစ်တပ်အနေဖြင့် မောင်တောမြို့တွင်းသို့ ဘင်္ဂါလီများ ၀င်ရောက်လာမှု မရှိရန် မြို့ပြင်
မှနေ၍ တားဆီးကာကွယ်နေကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းကြေငြာချက်တစ်ရပ်ကို နောက်နာရီပိုင်းအတွင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ
အဖွဲ့ချုပ်ပါတီက ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးအုန်းကြိုင်
က7Day News သို့ပြောသည်။ မောင်တောမြို့သို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးရောက်ရှိနေကြောင်း မောတောမြို့နယ်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက 7DayNews သို့ပြောသည်။
by Thuriya Myo
ရိုဟင်ဂျာအရေးတောင်းဆိုသူများသည် ပြည်တွင်း၌ အုတ်အော်သောင်းနင်း
ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထိုအချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်စွာ ခရီးထွက်လာမည့်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နိုင်ငံတကာသတင်းထောက်များမှ ထိုကိစ္စအား
မေးမြန်းဖြစ်အောင် အကွက်ဆင်ခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လူ့အခွင်းအရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် မျှတသောအမြင်ရှိသဖြင့်၊ ရိုဟင်ဂျာများလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရမှု၊ စစ်တပ်၏သတ်ဖြတ်ညဉ်းဆဲ
ခံရမှု၊ ဘာသာရေးအရခွဲခြားဖိနှိပ်ခံရမှုတို့ကို ရုပ်လုံးဖော် ရှေ့တန်းတင်ကာ
ဖြစ်နိုင်လျှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောမည့်ခန်းမများရှေ့တွင် လူစု
လူဝေးဖြင့် ဆန္ဒပြခြင်းများလည်း လုပ်ထားဖွယ်ရာရှိပါသည်။ တဖက်တွင်လည်း
ဒေါ်စုသွားရောက်မည်ဆိုသည့် ဘီဘီစီအသံလွှင့်ဋ္ဌာနတွင်လည်း ထိုမေးခွန်း
များအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမေးမြန်းကြရန် လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဟု ယူဆသည်။
သို့သော် ရိုဟင်ဂျာများသည် အယ်လ်ခိုင်ဒါကဲ့သို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများ
နှင့် အဆက်အစပ်ရှိခြင်းအား အမေရိကန်အပါအ၀င် ကမ္ဘာကသိထားခြင်း
သည် ၎င်းတို့၏၀ါဒဖြန့်ချိရေးအတွက် ကြီးစွာသောအားနည်းချက်ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့မှ ရခိုင်အမျိုးသားများ စုဝေးကာ တောင်းဆိုချက် ထုတ်ပြန်
ယနေ့နေ့လည် ၁နာရီကျော်မှစတင်၍ ရန်ကုန်မြို့ ရေတာရှည်လမ်းဟောင်းရှိ ဓည၀တီကျောင်းတွင် ရခိုင်အမျိုးသားများ စုဝေး၍ ရခိုင်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့် အဖြစ်အပျက်များနှင့် ပတ်သက်၍ တောင်းဆိုချက် ၆ ချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ယင်းတောင်းဆိုချက်များမှာ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့တွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် မီးရှို့မှုများ လုယက်မှုများ အမြန်ဆုံးထိန်းသိမ်းပေးရန်၊ ကျောက်ဖြူတွင် ဖြစ်ပျက်သည့် မုဒိမ်း၊ လူသတ် ပစ္စည်းယူသည့် အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျူးလွန်သူကို အများပြည်သူရှေ့တွင် အပြစ်ပေးရန်၊ ရန်ကုန်နှင့် အခြားမြို့များတွင်ရှိသည့် တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လျှက်ရှိသည့် ဘင်္ဂါလီများကို ဖေါ်ထုတ် စစ်ဆေးရန်၊ စစ်တွေဆူပူမှုကို အမြန်ဆုံး ထိန်းသိမ်းပေးရန် စသည်တို့ ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။
ရခိုင်အမျိုးသား ၅၀၀ ကျော်ပါဝင်သည့် လူထုစည်းပေးပွဲတွင် ၎င်းတို့၏ အမြင်များ၊ ခံစားချက်များကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
လူထုစည်းဝေးပွဲအပြီး ခေါင်းစည်းအဖြူများ ပတ်ကာ ၂ ယောက်တတွဲ ဓည၀တီကျောင်းမှ အပြင်သို့ထွက်ခွာရန် ပြင်ဆင်နေကြသည်ဟု သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
the Voice Weekly ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားနေသော အခြေအနေများကို
ဖြေရှင်းပေးရန် နိုင်ငံတော် ဒုတိယ သမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း
မောင်တောမြို့သို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တိုးတက်ရေး
ပါတီနှင့် ရခိုင်အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြား
By: ပြည်သူ့ခေတ် “အကြမ်းဖက်ခံရခိုင်အမျိုးသားညီအစ်ကိုမောင်နှမများအား စာနာထောက်ထားပါသည်။ တိုင်းတပါးသားများကျူးကျော်မှု အပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်ရှုံချပါသည်” စာတမ်းကိုင်ဆောင်လျက် အမျိုးသားနှစ်ဦးနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးတို့က ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေရှိမြို့တော်ခန်းမအနီးတွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာစဉ် လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများမှ ဖြောင်းဖျ လူစုခွဲစေခဲ့သည်။(ဇွန်၉ရက်၊ နံနက် 10နာရီခွဲခန့်)
Messenger ဓည၀တီကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော်ကြီးနှင့် လူကြီးများက ဓည၀တီကျောင်း
မှ ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရန် လုပ်ဆောင်နေသော ရခိုင်
တိုင်းရင်းသား လူငယ်များကို ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမပြုရန် ဖျောင်းဖျနေ
ကြောင်း Messenger သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများ၏ အကြမ်းဖက်မှု ကို တွေ့ကြုံနေရသော ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အခြေအနေအား ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အထူးလုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား တစ်ရာ ခန့်သည် ယနေ့ နံနက် ၇ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်တွင် မြန်မာ့လေကြောင်းပိုင် ATR 72 လေယာဉ်ဖြင့် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ ထွက်ခွာသွားကြောင်း The Voice Weekly သတင်းရင်းမြစ်များ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
The Voice Weekly about an hour ago
စစ်တွေအနီး ကျေးရွာသုံးရွာမှ တုတ် ဓါးကိုင်လူအုပ်အား လုံထိန်းများက စစ်တွေမြို့ဘက်မရောက်စေရန် ထိန်းထား by Yangon Press International on Saturday, June 9, 2012 at 6:48am · ညနေ ၅နာရီ၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၂၊ YPI ညနေ ၄နာရီ ၁၅ ၀န်းကျင်တွင် စစ်တွေလေယာဉ်ကွင်း အနီးရှိ တပိုင်၊ ဘုမယ်နှင့် သဲချောင်းကျေးရွာများမှ ဘင်္ဂါလီလူမျိုး အယောက် ၁၀၀၀ ခန့်က တုတ်၊ ဓါးများကိုင်ဆောင်၍ စစ်တွေမြို့ဘက်သို့ ဦးတည်လာရာ လုံထိန်းရဲများက သေနတ်ထောင်ဖေါက်ကာ နောက်ဆုတ်စေခဲ့သည်။ ယခုလောလောဆယ် အနေအထားတွင် ရထားလမ်း တဖက်မှ ယင်းလူအုပ်က လမ်းတဘက်တွင်ရှိသည့် လုံထိန်းရဲများအား ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်လျှက်ရှိသည်ဟု စစ်တွေမြို့ ရခိုင်အမျိုးသား စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က ပြောသည်။ စစ်တွေမြို့ခံများအနေဖြင့် ယခုအနေအထားတွင် လုံထိန်းများက တားဆီးလိုက်နိုင်သော်လည်း ညဘက်တွင် ယင်းတုတ် ဓါးကိုင်စွဲသူ လူစုလူဝေးက စစ်တွေမြို့ရပ်ကွက်များကို အန္တရာယ်ပြုလာမည့် အရေးစိုးရိမ်လျှက်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ယင်းကျေးရွာ ၃ ရွာမှာ ပင်လယ်ထွက်ပေါက်နှင့်နီးစပ်သည့် ကျေးရွာများဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က စိုးရိမ်စရာအခြေအနေများကတော့ ဒီအတိ...
မောင်တောဖြစ်စဉ် (ဇွန်လ ၈ ရက်)၊ ထပ်မံရရှိသောဓါတ်ပုံ...
မောင်တောအရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး NLD သဘောထားကြေညာချက် ...
ရုပ်မြင်သံကြားမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ က ပြည်သူ...